Tiger Zinda Hai 337 Crore ayuu marayaa PK waa laga taalabsan doonaa welina ganacsigiisa wuu socdaa! – Filimside.net
Tiger Zinda Hai 337 Crore ayuu marayaa PK waa laga taalabsan doonaa welina ganacsigiisa wuu socdaa!
January 29, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: January 29, 2018
Mega Star Salman Khan iyo Katrina Kaif filimkooda Tiger Zinda Hai ayaa weli ganacsi adag sameenayo inkastoo Hindiya inteeda badan tiyaatarada ku yaalo filimka Padmaavat uu heeto.
TZH waxaa u suura gashay inuu keeno 1.65 Crore (Trade Figure) todobaadkiisa lixaad sedexda maalmood ee ugu horeyso haatana ganacsigiisa gudaha Hindiya wuxuu marayaa 337 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday.
Waa hubaal in Tiger Zinda Hai todobaadkiisa lixaad 2 Crore ka badan keeni doono asigoo noqonayo 10-kii sano ee ugu dambeesay filimka sedexaad ee 2 Crore ganacsigiisa gaaro todobaadkiisa lixaad kaliya Bahubali – The Conclusion iyo 3 Idiots ayaa darajadaan naadirka ah kaga horeeyeen!
Waa hubaal sidoo kale TZH inuu noqon doono filimka sedexaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyo canshuurta kadib asigoo ka talaabsan doono filimka PK iyo lacagihiisa 338 Crore weliba todobaadkan marka uu dhameesto ama horaanta todobaadka dambe ayuu darajadaas la wareegi doonaa.
Balse PK ayaa TZH dheeraan doono 20 Crore marka laga hadlaayo lacagaha canshuurta ka hor (Gross Money) waana halka cabirka saxda laga qaadan karo madaama xiligaan nidaama GST ee Hindiya laga hirgaliyay filimada ka faa’iideestan uusan PK helin xiligasiisii.
Fadlan hoos kaga bogo TZH ganacsiga guud ee uu gudaha Hindiya ka sameeyay ilaa haatan soo daabacday shabakada BOI:
Todobaadka Lixaad – 1.65 Crore (Mudo 3-maalmood)
Wadarta Guud – 337.14 Crore (Trade Figure) (Qiyaas ahaan)
zakariye TZH secret super star yaa lacag badan hada dal & dibad websetyada waxay qorayan in sss uu dhafay TZH kadib marki China lasaaray uuna kasamaynayo ganacsi fiican noso gudbiya arintas inay isku jiran & labadoda midka horeya hindiya ma ahan isku dar dal & dibad
Filimside qiyasti aan bixiyay waxay ahayd tzh inu gari dono record ka pk hadana waxa muqato inu dhafayo
Waa runtaa maalin walbo ayaad ku adkeesaneysid TZH inuu PK gaari doono hadana ugu dambeyntii sadaashadaadii wey hirgashay.
Waxaa nagu dhiiri galisay inaan mustaqbalka marka filim weyn tiyaatarada la saaro aqristayaasha aan sadaal ka qaadno ku aadan filimka cusub cimri ahaantiisa halka uu gaari karo.